चीनको वुहान शहरबाट प्रारम्भ भएको भनिएको कोरोना भाईरस(कोभिड–१९)को संक्रमण तिब्र रुपमा विश्वव्यापी बनिरहेकोछ । यस भाइरसको बिरुद्ध कुनै खोप र औषधि पत्ता नलागेको अवस्थामा यसको संक्रमण फैलन नदिन नेपालसहित विश्वका धेरै जसो मुलुुकहरु लकडाउनको अवस्थामा रहेकाछन् ।
विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा सरोकारवालाहरुमा मनोवैज्ञानिक सन्त्रास व्याप्त रहेकोछ । यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने धेरै जसो विद्यार्थीहरु दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने न्युन आय वर्गका परिवारका छन् । लकडाउनको यस परिस्थितीमा उनीहरुको परिवारमा हातमुख जोर्नेसमस्याले विद्यार्थीहरुमा पर्ने मनोवैज्ञानिक असर र त्यस पछिको सिकाइमा यसले पार्ने गम्भीर असर अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
लकडाउन,कोभड १९ र बाढी पहिरो बाट समस्यामा परेका विद्यार्थीहरुलाई राहत सहुलियत सहित उचित स्वास्थ सुरक्षाको ब्यबस्थापन बिना विश्वविद्यालयको परिक्षा तालिका निकाल्न हतार नगरौं । लकडाउन मात्र खुलेको हो कोरोना नियन्त्रण भएको छैन। विद्यार्थीको स्वास्थ सुरक्षाको ब्यबस्थापनको विधि तय गरौं । विद्यार्थीहरु बिगत ४ महिना देखि अध्ययनबाट बन्चित छन्, उनिहरुलाई अध्ययन र परिक्षा तयारीको लागि केही समय छुट्याउंन आवश्यक छ ।
विद्यार्थीहरु आ-आफ्नो घरमा छन उनिहरु कलेज र विश्वविद्यालय सम्म आउनका लागि समय लाग्ने हुंदा त्यस लाई पनि मध्यनजर गरौं । त्यसका लागि सर्वप्रथम कन्टयाक ट्रेशिंगको आवश्यकता छ । सहरी क्षेत्रमा भाडामा बसेर अध्ययन गर्नु पर्ने विद्यार्थीहरुलाई ४ महिनाको भाडाले थप तनाव दिने हुंदा उनिहरुलाई उचित राहत र सहुलियतका लागि बाताबरण बनाउन आवश्यक छ ।
विश्वविद्यालय हरुले आफ्ना विद्यार्थीहरु कहाँ छन,परिक्षामा सहभागी हुन सक्छन कि सक्दैनन्, उनिहरुको स्वास्थ सुरक्षाको ब्यबस्थापन कसरी गर्ने, परिक्षा कसरी लिने, शिक्षक कर्मचारी कसरी परिचालन गर्ने, स्वास्थ उपकरणहरु को ब्यबस्थापन कस्तो बनाउने भन्ने कुराको ख्याल गर्नु जरुरी छ । पहिला यी बिषयमा छलफल गरौ, उचित निकास सहित शैक्षिक बाताबरण तयार गरौं । अझै लामो दुरिका सवारी साधन संचालन भएका छैनन, बरु बाकिं रहेका रिजल्ट हरु प्रकाशन गरौं । विद्यार्थीहरुको बसाइको डाटा अनुसार होम सेन्टरको ब्यबस्थापन गरौं । शुल्कको निर्धारणका बिषयमा छलफल गरौँ। विद्यार्थी लाई सहुलियत र उचित स्वास्थ सतर्कता बिना परिक्षा सम्भव हुदैन जीवन भन्दा ठूलो परिक्षा हुन सक्दैन । तसर्थ तत्काल उचित बाताबरण बनाउन र निश्चिति समय दिएर मात्र परिक्षा तालिका सार्बजनिक गरौं ।
भौतिक रुपमा विद्यार्थीहरुलाई उपस्थित गराएर परिक्षा लिने हो भने विद्यार्थीहरुको आरडीटी/पिसिआर लगायतका स्वास्थ परिक्षण को जिम्मा सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा सरकारले लिनु पर्ने र विद्यार्थीहरुले विश्वविद्यालयमा बिमा शुल्क बापत तिरेको रकम बाट सबै विद्यार्थीहरुको कोरोना बिमा गरिनु पर्ने देखिन्छ अन्यथा विद्यार्थी कोरोनाको प्रयोग गर्ने प्रयोगशाला बन्न सक्दैनन्।
शिक्षा नियमावली वमोजिम बैशाख १ बाट विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने व्यवस्था छ ।विश्वविद्यालय तहका पनि आआफ्नै निर्धारित क्यालेण्डर छन् । २०७७ को शैक्षिक सत्र सम्बन्धमा अन्योल देखिएको छ । कोरोना महामारीको फैलँदो संक्रमणको अवस्थामा शैक्षिक संस्था सञ्चालन एवं शिक्षण कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा विभिन्न वहस र छलफलहरु भइरहेका छन् । शैक्षिक सत्र बैशाख १ भन्दा पछि लैजान मिल्ने वा नमिल्ने ? यस महामारीको अवस्थामा शिक्षण सिकाइ कार्य कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? भन्ने विभिन्न विचारहरु सतहमा देखापरेका छन् ।
विद्यालय/कलेजमा उपस्थित भएर शैक्षिक कार्यमा संलग्न हुन अभ्यस्त भएका बालबालिकाहरु संक्रमणको सन्त्रासका कारण बन्द रहेकोले घरमा नै रहन बाध्य छन् । शिक्षक¸पाठ्यपुस्तक र विद्यार्थीको त्रीकोणीय सम्पर्कमा मात्र सिकाई हुनसक्छ भन्ने मनोविज्ञानका विच अहिले बालबालिका वास्तविक सिकाईमा छैनन् भन्ने आम वुझाई छ।